Xeer ilaaliyaha Qaranka oo runta ka sheegay hay’ado lagu helay arin.. - iftineducation.com
Xeer ilaaliyaha Qaranka oo runta ka sheegay hay’ado lagu helay arin..
iftineducation.com – Dr Axmed Cali Daahir Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo manta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar uu ku tagay dalka Mareykanka ayaa kahadlay siyaasada xafiiska xeer ilaalinta ee ku wajahan la dagaalanka musuq-masuqa iyo ku tagri falka hantida qaranka.
Wuxuu sheegay xeer ilaaliyuhu in dadaal dheer ay ku bixin doonaan kahortaga iyo xakameynta musuq maasuqa waxaana uu lahadlay shacabka iyo madaxda dowlada oo uu kula dar daarmay ilaalinta amaanada ay u hayaan bulshada.
Waxaa uu dhinaca kale ka hadlay Dr Axmed Cali Daahir xeer ilaaliyaha guud ee qaranka halka uu marayo baaritaanada xafiisyada xeer ilaalinta iyo hanta dhowrka guud ee qaranka ay ku hayeen mas”uuliyiin katirsan dowlada ee lagu eedeeyey wax isdaba marin iyo musuq maasuq.
Sidoo kale,xeer ilaaliyaha qaranya ayaa uga digay mas’uuliyiinta amaanada ku ah Hantida Qaranka inay xil gooni iska saaraan sidii ay ku dhowri lahaayeen,islamarkaana aanu ku sameyn wax isdaba marin iyo masuq-maasuq.
Xeer ilaaliyaha ayaa maalmihii u danbeeyays safar ku marayay qeybo ka mid ah magaalooyinka dalka mareynkanka halkaasi uu kula soo kulmi mas’uuliyiinta Mareynkanka iyo waliba Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan.
Nin Hooyadiis madaxa MASAAR uga jarey iyo sabab aadan rumeysan karin